जेठ २९ गते २०७६
मनकारी मान्छे, जसले तिरिदिए २१ सय किसानको ऋण
चर्चित नायक अमिताभ बच्चनलाई बलिउडकै बादशाह यसै भनिएको होईन । करोडौँमा खेल्ने यी नायकले कलाकारको मात्र होईन उनले एक असल नागरिकको नाताले गर्नु पर्ने कत्वर्य पनि निर्वाह गरिरहेका छन् । समाज सेवामा समेत सक्रिय रहेका अमिताभले देशमा आई परेका भवितव्यमा ठुलो मन गरेर ठुलो आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छन् । यसबीच अमिताभले बिहारका २१०० किसानको ऋण तिरिदिएका छन् । उनले केही समय अगाडी बिहारका किसानहरुको ऋण तिरिदिने घोषणा गरे अनुसार… पुरा पढौ
घरमा पूजा पाठ कसरी गर्ने ?
कुनै पनि काम सुरु गर्नु भन्दा पहिला वा कुनै काममा सफलता हाँसिल गर्नका लागि अक्सर मानिसहरु घरमा पूजापाठ गर्ने गर्दछन् ता कि सोचेको काम सिद्द होस् । तर तपाइलाई आफ्नो मांगलिक कार्य पूर्ण सफल बनाउनका लागि पूजापाठको सहि तरिका कस्तो हुनुपर्छ थाहा छ ? निम्न कुराहरुमा ध्यान दिइयो भने पूजापाठ सही हुन सक्छ । पूजापाठको सही स्थानघरमा सधैं पूर्व वा उत्तर दिशामा नै मन्दिर राख्नु या बनाउनुपर्छ ।मन्दिर काठकै हुनुपर्छ ।… पुरा पढौ
मेकअप लगाएर किन सुत्न हुँदैन ?
मेकअप लगाएर सुत्ने गर्नु भएको छ ? चाहे त्यो बिर्सेर होस्, बाध्यताले होस् वा थकानले, मेकअप लगाएर सुत्नु पटक्कै राम्रो होइन। मेकअपको बाक्लो लेअर अनुहारमा लगाउनु राम्रो बानी होइन। लामो समय यस्तो मेकअप छालामा राखिराख्दा छालाले वातावरणबाट पाउने अक्सिजन लगायत अन्य आवश्यक रसायन लिन सक्दैन। जसले छाला चिलाउने, पोल्ने हुन्छ। जलन गराउँछ मेकअप लगाएर सुत्न कहिल्यै सुझाव दिइदैन। अझ फाउन्डेसनले सबैभन्दा बढी हानी गर्छ। यो तैलिय हुन्छ र छालामा जोडसंग… पुरा पढौ
यी ४ प्रकारका पुरुषको प्रेम सम्बन्ध कहिल्यै टुट्दैन
विवाहमा सम्बन्ध विच्छेद र प्रेम सम्बन्धमा ‘ब्रेक अप’ यो समयमा सामान्य घटना भइसकेका छन्। विवाह पछि वैवाहिक जीवन बचाउन र प्रेममा प्रेम सम्बन्ध बचाउन धेरै जोडीले ठूला कष्ट उठाउने गरेका छन्। एक अर्को समस्या नबुझ्ने, आफ्नै नियम र अनुशासन लाद्न खोज्ने र एक अर्काको निर्णयमा दख्खल दिने प्रवृति बढ्दा यस्ता घटना बढ्ने गरेका छन्। तर, यी ४ प्रकारका पुरुषको जीवनमा भने सम्बन्ध टुट्ने समस्या विरलै आउने गर्छ। महिलालाई सम्मान गर्ने… पुरा पढौ
कसरी बनेको हो ब्रम्हाण्ड ?
हामीले संसारलाई हेर्दा हजारौं बस्तुहरु देख्छौ । त्यसो त हामीलाई सबै कुराहरु देखेका हुदैनौ त्यसलाई हाम्रो वैज्ञानिकहरुले माइक्रोसकोपबाट हेर्छन् तब एक कण भित्र हजारौ ससाना कण, हजारौ जीवन लुकेको देख्छन् । पोखरीबाट पानीको एक थोपा लिएर हामीले हेर्‍यौ भने त्यस भित्र करोडौं जीव पाइन्छ । आखिर यत्रो ठुलो प्रकृति भित्र, यती ठुलो रचना गर्ने कुनै महामस्तिष्क (mastermind) अवश्य छ। विज्ञानको सुत्र (formulas) ले बताउछ, अन्तरिक्ष प्रणाली (solar system) को फर्मुलाले… पुरा पढौ
प्रकाश सपुतले “गलबन्दी” चोरी गरेकै हुन् त ?
अहिलेको अवस्थामा निकै चर्चा र युटुवमा ट्रन्डिङ नं. १मा पुगेको “गलबन्दी”मा पश्चिमी शैलीको गन्ध भेटिन्छ । गीतको संगित , आवाज , शब्द र भिडियोमा नेपालको रोधी बस्ने संस्कृतीलाई जस्ताको त्यस्तै उतारिएको गलबन्दी मन नपराउने बालबालिका बृद्धबृद्धादेखि कोही छैनन् तर चर्चित गायक , लय संयोजक तथा रचनाकार समेत रहेका प्रकाश सपुत ल्याएको उक्त गीत यसरी भाईरल बनिरहदा चोरी भएको भन्ने आरोप पनि उत्तिकै छ । उनले “गलबन्दी” गीत चर्चित गायक शम्भु… पुरा पढौ
नेहा कक्करको ठमेल कन्सर्टमा विवाद, सञ्चालक पक्राउ
बलिउड गायिका नेहा कक्करको ठमेल कन्सर्टमा क्षमतथाभन्दा बढी टिकट बिक्री गरेको भन्दै प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ। ठमेलको एलओडी डिस्कोमा आयोजित कार्यक्रममा क्षमता भन्दा बढी टिकट बिक्री गरेको भन्दै आयोजक पारामाउन्ट इन्टरटेन्मेन्ट प्रालिका दीपक घिमिरेसहित तीन जनालाई महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले पक्राउ गरेको हो। उनीहरुले क्षमता भन्दा बढी टिकट बिक्री गरेकाले टिकट काटेका दर्शकले समेत हेर्न नपाएको भन्दै प्रहरीकोमा उजुरी गरेका थिए। बढी टिकट बेचर ठगी गरेको भन्दै उनीहरूलाई… पुरा पढौ
कति छन् हाम्रा देवी देवता ? यस्तो छ यथार्थ
३३ कोटी भगवानको बारेमा त धेरैले धेरै कुराहरु सुन्ने गरेका छौं। तर, अधिकान्सलाई जानकारी नहुनसक्छ यो ३३ कोटीको अर्थ ३३ करोड हो कि ३३ प्रकार हो? नेपाली भाषालाई मान्ने हो भने कोटीको अर्थ करोड हुन्छ भने संस्कृत भाषामा कोटी प्रकार भन्ने अर्थमा हुन्छ। जड, वृक्ष, प्राणी, मानव, पितर, देवी-देवता, भगवान र ईश्वर। वेदान्तका अनुसार सनातन धर्ममा सबैभन्दा ठूलो ईश्वर, परमेश्वर या परमात्मा हुन्छन्। वेदमा परब्रह्म परमात्मालाई ब्रह्मको नामले पनि चिनिन्छ।… पुरा पढौ
कलाकार संघमा सरिता लामिछानेलाई हराउँदै रविन्द्र विजयी
नेपाल चलचित्र कलाकार संघको अध्यक्ष पदमा रविन्द्र खड्का विजयी भएका छन् । शनिवार सम्पन्न भएको संघको चुनावमा प्रतिद्वन्द्वी सरिता लामिछानेलाई पछाडि पार्दै रविन्द्र विजयी भए । संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका खड्काले २१८ मत लिए भने लामिछानेले १६१ मत पाइन् । खड्काले प्रतिद्वन्दी लामिछानेलाई ५८ मतले पछाडि पारेका हुन् । यस्तै उपाध्यक्षमा रेजिना उप्रेतीले २४३ मत ल्याएर विजयी भइन् । अर्को उपाध्यक्षमा सानुकुमार ताम्राकारले पनि जीत हासिल गरे । प्रतिद्वन्दी मनोज… पुरा पढौ
आयुष्मानकी पुर्व प्रेमिका परमिताको ‘क्विन’ सार्वजनिक(भिडियो)
नायिका तथा मोडल परमिताले आर.एल.राणाले आफ्नै जीवनमा आधारित गीत गाएकी छन् । उनले गाएको ’क्विन’ बोलको म्युजिक भिडियो हालै सार्वजनिक भएको छ । भिडियोमा परमिताकै अभिनय रहेको छ । गीतको भिडियोमा परमिता आफ्नै कथालाई महसुश गर्न सकिन्छ । डिप्रेसन भएर आत्महत्याको प्रयास गरेको खुलाउँने उनले ’क्विन’मा आफुलाई कमजोर सोच्ने र दुनियाँको डरमा आफ्नो क्षमतालाई लुकाउनेलाई मनोबल प्रदान प्रकारको सन्देश दिन खोजेकी छिन् । ‘सिके’ को निर्माण तथा निर्देशन गरेको… पुरा पढौ